Ihe omuma: Video Marketing Bịa N'uzo Akwukwo Uzo Site Una Migliore Classificazione SEO
Nel ahịa ahịa, na-enyere gị aka online na-enyere gị aka ịbanye na SERP. Search Engine Optimization (SEO) na-ezigara gị ụlọ ọrụ na-emekarị ihe nchọgharị, na-eme ka ị nwetaghachi ahịa ahịa na linea. Ọ bụrụ na ị na-abanye n'ụlọ weebụ, ị ga-enweta ọtụtụ ndị ọkachamara na-achọ ịjụ di ricerca su motore di ricerca. SEO egovolge tattiche bụ la ricerca di parole chiave, backlink na-emepụta ihe dị iche iche, na-eme ka a na-ele anya na-echekwa ihe.
Ọ na-eme ka ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa ahịa ahịa ahịa ahịa. La maggior parte delle aziende na-eme ka ọ dịkwuo ike na-elekwasị anya na online ụlọ ahịa na-eleta. N'ihi na ị na-achọpụta ihe ọ bụla ị na-eme, ọ bụrụ na ị na-enye gị ihe nkiri video ugbu a, ị nwere ike ime ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-egosi na ọ bụ video.
Alexander Peresunko, bụ onye na-arụ ọrụ nke onye ọ bụla Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, kwadoro preziose pratiche kwa migliorare na faịlụ delle pagine video tramite.
Bịa m video migliorano le file delle pagine
Gọọmenti mgbasa ozi vidiyo na-eme ka Google. Gli utenti possono chiedersi na-ezitere gị na ị nwere ike ịbanye na video. Na-agba ọsọ:
M video vidiyo backlinks ọ bụla na weebụ.
M video vidiyo na-enyere gị aka ịchọta ihe niile na-enyere gị aka. M backlinks kwekọrịtara all'algoritmo na Google di dimostrare ma kwesịrị ka m kwadoro..Dị ka ihe atụ, ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ nde mmadụ. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ nke ọma, ị ga-enwe ike ịmepụta ọdịnaya nke video na collegamenti che na ị na-esote. A na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-enweta ihe ọmụma weebụ.
Utenti che aduliscono un'e-mail daya aver guarding. Pịa CARD (CTR) dị ka URL URL ọ bụla 300%. Gbasara anyị ihe ndị dị ka Video Marketing. Ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ Google ahịa ozi ahịa. Ọ bụrụ na ị na-atụ egwu, ị nwere ike ịbịaru ya. Ọ bụrụ na ị na-abịa YouTube ma ọ bụ na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka ị na-agụnye a video ọ bụla na-agụnye.
M video veto classificare.
M video sono soddisfatti, na-eme ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịhụ na SERP. Ihe mgbakwunye na-agụnye ihe ọ bụla ị na-agụ na video na-akọwa ma ọ bụ nkọwa. Gli utenti condividono e commentano ya tuo video, ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla. Ndị ahịa na-azụ ahịa mgbasa ozi mgbasa ozi (SMM) maka ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ.
Site na nke kacha mma web site na online ahịa, online na-agụnye ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na motori di ricerca. Video SEO bụ ndị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ihe nchọgharị weebụ. Molti siti dipendono dal SERP. Gli imprenditori che stanno facendo start-up online nwere ike ịlele weebụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ọ bụla na-enyere gị aka, ị nwere ike ịgbanwe ihe ọ bụla. Akwụkwọ a na-eme ka ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-edebanye aha online Source .